The Dark and the Wicked (2020) | MM Movie Store
Louiseနဲ့ Michaelတို့ မောငျနှမနှဈယောကျဟာ နာမကနျြးဖွဈတဲ့ဖခငျကို ပွုစုဖို့ လယျတဲအိမျလေးကို ပွနျလာခဲ့ကွတယျမိခငျဖွဈသူဟာ သူတို့ကို မွို့ပွနျဖို့အကွိမျကွိမျပွောပွီး ဘယျလောကျတောငျစိတျထိခိုကျမှုတှရှေိနလေဲမသိ…အဲ့ဒီညမှာပဲ ဆှဲကွိုးခသြတျသကော အဆုံးစီရငျသှားတယျ….
ဒီမောငျနှမဟာ အိမျကိုပွနျရောကျပွီးနတျဆိုးတဈကောငျရဲ့ ထိတျလနျ့ဖှယျရာအခွောကျခံရပါတော့တယျ…ကွညျ့ရတာ ဒီနတျဆိုးကွောငျ့ပဲမိခငျဖွဈသူ အဆုံးစီရငျသှားပုံရပါတယျ…ဒီနတျဆိုးကရော ဘာကွောငျ့ ခွောကျလနျ့နရေတာလဲ…ဒီမောငျနှမ(၂)ယောကျကရော အဲ့ဒီဒဏျတှကေိုကြျောလှားရငျဆိုငျနိုငျပါ့မလား..
နတျဆိုးရဲ့ရညျရှယျခကျြအမှနျကဘာလဲ…မောငျနှမ(၂)ယောကျကရော ဒီနတျဆိုးကို နှိမျနှငျးနိုငျဖို့နညျးလမျးရှိပါ့မလား…Horrorကားကောငျးကွညျ့သူတို့လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျးး….
Louiseနဲ့ Michaelတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကို ပြုစုဖို့ လယ်တဲအိမ်လေးကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ်မိခင်ဖြစ်သူဟာ သူတို့ကို မြို့ပြန်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြီး ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေလဲမသိ…အဲ့ဒီညမှာပဲ ဆွဲကြိုးချသတ်သေကာ အဆုံးစီရင်သွားတယ်….
ဒီမောင်နှမဟာ အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးနတ်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအခြောက်ခံရပါတော့တယ်…ကြည့်ရတာ ဒီနတ်ဆိုးကြောင့်ပဲမိခင်ဖြစ်သူ အဆုံးစီရင်သွားပုံရပါတယ်…ဒီနတ်ဆိုးကရော ဘာကြောင့် ခြောက်လန့်နေရတာလဲ…ဒီမောင်နှမ(၂)ယောက်ကရော အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုကျော်လွှားရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား..
နတ်ဆိုးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကဘာလဲ…မောင်နှမ(၂)ယောက်ကရော ဒီနတ်ဆိုးကို နှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းရှိပါ့မလား…Horrorကားကောင်းကြည့်သူတို့လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်းး….